Kutheni usebenzisa iCRM? Izibonelelo zoLawulo lwaBudlelwane nabaThengi
NgoMvulo, Februwari 14, 2022 NgoMvulo, Februwari 14, 2022 Douglas Karr
Ndibonile ukuphunyezwa okuhle kweCRM kwikhondo lam lomsebenzi… kwaye ezinye zazo yoyikeka ngokupheleleyo. Njengayo nayiphi na itekhnoloji, ukuqinisekisa ukuba iqela lakho linjalo lincinci ixesha lokusebenza kuyo kwaye ixesha elininzi ukubonelela ngexabiso ngayo sisitshixo sokuphunyezwa kweCRM enkulu. Ndizibonile iinkqubo zeCRM ezingasetyenziswanga kakuhle eziyekisa amaqela okuthengisa… kunye neeCRM ezingasetyenziswanga eziphindaphindayo kwimizamo kunye nabasebenzi abadidekileyo.
Ngelixa sonke sibiza isoftware egcina ulwazi lwabathengi ngeCRM, igama ulawulo oludibene nabathengi kubandakanya iinkqubo kunye nobuchule kunye netekhnoloji. Inkqubo yeCRM isetyenziselwa ukurekhoda, ukulawula, kunye nokuhlalutya unxibelelwano lwabathengi kubo bonke ubomi bomthengi. Ukuthengisa kunye nentengiso isebenzisa le datha ukuphucula ubudlelwane kwaye, ekugqibeleni, ixabiso lalowo mthengi ngokugcina kunye nokuthengisa okongeziweyo.
Jonga apha kwiiNkcukacha-manani zaMva nje zeCRM
Zithini izibonelelo zokusebenzisa iCRM?
Ngaba unayo iqela lokuthengisa elilawula iziseko zedatha yazo? Ulawulo lwe-akhawunti kunye nabameli beenkonzo abalawula amanqaku abo malunga nomthengi ngamnye? Njengokuba inkampani yakho ikhula, abantu bakho bayajika, kwaye abantu abaninzi nangakumbi kufuneka banxibelelane namathemba kunye nabathengi… uza kuyilandela njani?
Ngokusebenzisa inkqubo esembindini phakathi kwendawo yokubamba abathengi kunye nentengiso, inkxaso, kunye nentengiso, idatha edibeneyo iya kuba luncedo ngakumbi kumbutho nakwiziko ledatha elifikelelekayo kwamanye amaqonga. Nazi iindlela ezilishumi zokuba imibutho ibone ukubuya okuhle kutyalo-mali lweCRM kule mihla.
Ukubika kwintengiso, ukuthengisa, kunye nokugcinwa kwindawo esembindini ngexesha lokwenyani kwaye kunokuqikelelwa kusengaphambili ngokuthenga iihambo kunye nemibhobho yokuthengisa.
Integration kwamanye amaqonga okuzenzekelayo okuthengisa, amaqonga obalo, amaqonga edatha yabathengi, kunye neenkqubo ezininzi zinokufezekiswa.
into yokuZenzekelayo inokunciphisa zombini iinzame kunye neengxaki ezibangelwe kukutyhalwa ngesandla kunye nokutsalwa kwedatha ukusuka kwinkqubo ukuya kwinkqubo.
Iinkqubo inokumiliselwa apho kususwe khona izinto eziphambili kwaye abasebenzi abafanelekileyo bayaziswa xa kufuneka kwenziwe umthengi.
Ukukhulisa amaphulo anokumiliselwa ukunceda ukukhokela abathengi ngokusebenzisa ifanele yokuthengisa.
umthengi ukwaneliseka kunye nokugcinwa kunokunyuka njengoko kunikezelwa ngesandla okumbalwa ekufuneka kwenziwe njengombono we-360-degree yomthengi ngamnye ufikeleleka ngokulula.
Amaqela okuthengisa inokujongwa kwaye iqeqeshwe ukukhawulezisa ukusebenza kwayo. Ingxelo evela kwintengiso inokudityaniswa kwintengiso ukuphucula umgangatho kunye nokujoliswa komxholo kunye nezicwangciso zentengiso.
Marketing amaphulo anokujongwa ngokusebenza kwawo kunye nokuphuculwa kokusebenzisa ukwahlulwa kunye nokwenza umntu ngokusekwe kwidatha echanekileyo. Njengokukhokelela kokuguqula kubathengi, amaphulo anokuchaphazeleka ngokufanelekileyo kwintengiso, ukubonelela ngobukrelekrele obongezelelweyo kwimpembelelo yesicwangciso ngasinye.
Amathuba inokuchongwa kwaye kusetyenzwe ngayo njengoko inkqubo isetyenziselwa ngokupheleleyo ukuthengisa, ukuthengisa kunye nokugcina abathengi.
ulwazi igcinwe malunga nomthengi ngamnye ukuze utshintsho ebantwini nakwiinkqubo zingaphazamisi amava omthengi.
Ukuba abaphathi beakhawunti yakho, abameli beenkonzo zabathengi, kunye nabameli bokuthengisa babhala ngokuchanekileyo intsebenzo nganye kunye nomthengi kwiCRM yakho, ishishini lakho linevenkile enexabiso elingenakuthathwa. Bonke abasebenzi bakho banokuvumelanisa kwaye baqonde ngokupheleleyo ixabiso kunye nembali yethemba ngalinye okanye umthengi ngamnye. Kwaye, ngokunika ingqalelo, kunokuphucula ubudlelwane kunye nalo mthengi.
Umiliselo olukhulu lweCRM kufuneka luvumele indibaniselwano kunye nokuzenzekelayo, aziloncedo kangako ngaphandle kwebhokisi njengoko izinto zakho zokuthengisa zeCRM zinokuzenza ngathi zinjalo.
Ukuba utyala imali kwi-SaaS CRM, zilungiselele ukuba ibe kukuxhomekeka okukhulu kuphuculo lwetekhnoloji kunye nohlahlo-lwabiwo mali. Qiniseka ukuba unenkqubo enomlinganiso efikelelekayo, edibanisa kunye netoni yezinye iinkqubo, kwaye iyaqhubeka ukongeza amanqaku ngakumbi kwimveliso evelisiweyo kunye nokufunyanwa.
Njenge Umlingane wokuphunyezwa kweCRM, okuncinci xa sibona iCRM ihlanganiswe ngokupheleleyo, izenzekelayo, kwaye isetyenzisiwe, kokuncinci ukubuya kutyalo-mali lwetekhnoloji! I-CRM kufuneka ibe sisisombululo ukunceda ishishini lakho ukuba lisebenze ngakumbi kwaye lisebenze, hayi kancinci. Khetha iqonga kunye neqabane oza kuliphumeza ngobulumko.
Ngaba ukuthengisa kunye nokuThengisa kuyimfuneko kwiCRM?
Abantu INetHunt CRM iphuhlise le infographic emva kokuhlalutya indlela abaziphatha ngayo abathengi emva kwesifo.
Ngelixa umjikelo wentengiso we-B2B unokuba lide nje iinyanga ezininzi, ukuba awunyangi amathemba akho ngokuchanekileyo, banokukushiya bathi cwaka. Ukufunyanwa kwabathengi kunendalo entsonkothileyo kwaye isebe lakho lentengiso linokufuna unxibelelwano oluninzi ngaphambi kokuba umkhombandlela ukulungele ukuvavanya imveliso yakho. Okokugqibela, umsebenzi ongqinelanayo wentengiso kunye nentengiso ubalulekile kwi-B2B ukuze kufezekiswe ukusebenza ngokukuko kwengeniso. Zombini zifuna itekhnoloji yebridge ukuba ibe kwindlela enye.
UAnna Pozniak, CRM yeNetHunt
Iingcebiso ezi-4 zokuPhuhlisa iQhinga lakho leCRM
Abantu kwi I-CrazyEgg baye bahlanganisa le infographic kunye neengcebiso ezintle kwiinqanaba ezi-4 zokucwangcisa iSicwangciso sakho seCRM ... Umbono, Hlalutya, Qhagamshela, kunye neDatha.
tags: Izibonelelo zecmcrazyeggCRMcrm infographicisicwangciso se-crmulawulo oludibene nabathengiI-crm enomdlauphawuyintoni icrmnini ukutyala imali kwi-crmKutheni icrm ibalulekilekutheni usebenzisa i-crmkutheni usebenzisa i-crm